Harry Styles "Ịhụnanya na njem nlegharị anya" ikpeazụ zutere nnukwu ọchịchọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Harry Styles "Ịhụnanya na njem nlegharị anya" Emechara ya na nnukwu ọchịchọ
Harry Styles "Ịhụnanya na njem nlegharị anya" Emechara ya na nnukwu ọchịchọ
GRAMMY Award® onye mmeri zuru ụwa ọnụ Harry Styles ga-abụ onye na-ese egwu mbụ maka nnukwu mmeghe nke UBS Arena na Belmont Park, NY, na Sọnde, Nọvemba 28 dị ka ngwụcha nke ịhụnanya na njem 2021 ya. Tiketi ga-ere ahịa malite na Fraịde, Nọvemba 5 na elekere 12 nke ehihie na Ticketmaster.com.
N'ihi nnukwu ọchịchọ na iji hụ na ndị Fans na-enweta tiketi ozugbo, ndebanye aha presale maka ihe ngosi a na UBS Arena, na ókèala Queens na Nassau County, dị site na Ticketmaster's Verified Fan program ugbu a site na Tuesday, November 2 na 12 Noon. Verified Fan presale ga-eme na Tọzdee, Nọvemba 4 na 12 Noon na ọha ọha na-ere na-amalite Fraịde, Nọvemba 5 na 12 Noon. Nkọwa ndị ọzọ dị na https://hstyles.co.uk/tour.
Ndị otu American Express Card ga-enwe ohere ịzụta tiketi maka ihe ngosi Sọnde, Nọvemba 28. Amex Presale na-agba na Tọzdee, Nọvemba 4 na 12 Noon ruo 10 pm ET n'ihu ọha ọha. Iji mee ka njedebe nke njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nke Harry, American Express nwere obi ụtọ iweghachite "American Express X Harry Styles Love Bus" - Fine Line-sitere n'ike mmụọ nsọ, ụdị 70's decked bọs nke ekpughere na mmalite nke njem ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ. gara aga na Los Angeles.
Na UBS Arena, ndị otu kaadị nwere ohere ịbanye ngwa ngwa ma nwee ike ịzụta ngwa ahịa Harry Styles pụrụ iche site na ebe a na-ere ahịa niile n'ọgbọ egwuregwu ahụ.
N'oge na-adịbeghị anya American Express kwupụtara ọtụtụ uru agbakwunyere n'ofe mmekọrịta ntụrụndụ dị iche iche gụnyere ịnweta olulu maka njem nlegharị anya, ihe ngosi naanị onye otu kaadị, ọnụ ụzọ mbata na ebe ezumike n'ebe ndị mmekọ, na ngwa ahịa pụrụ iche, na-eme ka ahụmịhe ntụrụndụ ka mma #withAMEX. Site na presale ruo na iwebata teknụzụ ịkwụ ụgwọ wearable iji welie ahụmịhe mmemme egwu, American Express etinyela aka na idobe ndị otu kaadị jikọọ na ụwa nke ntụrụndụ ihe karịrị afọ 25.
Na-emepe Nọvemba 20, 2021, UBS Arena na Belmont Park bụ nke emere maka egwu ma wuo ya maka hockey. Emepụtara ihe ntụrụndụ na ebe egwuregwu kachasị ọhụrụ na New York yana ebe obibi nke New York Islanders na mmekorita ya na Oak View Group, ndị New York Islanders, na Jeff Wilpon. Inweta mmụba dị ukwuu na akụ na ụba mpaghara, ọkachasị mgbe ọrịa na-efe efe emetụtala ọrụ akụ na ụba, ebe ntụrụndụ nke ụwa, nke nwere oge na-adịghị agwụ agwụ na ihe eji eme ya, ga-eji teknụzụ na ihe eji eme ihe dị elu mee ihe n'oge gara aga.
Nzube ọtụtụ ijeri $1.1, steeti nka ga-anabata ihe karịrị 150 isi emume kwa afọ ka ha na-ebuga ahụmịhe ntụrụndụ ndụ na-enweghị atụ gụnyere nlegharị anya doro anya na egwu egwu. Emebere UBS Arena iji jide mmadụ 19,000 maka egwu egwu na ndị na-ege ntị ruo 17,000 maka egwuregwu NHL. Na mbọ iji wulite ọdịnihu ndụ ndụ ndụ, UBS Arena na-ezube ịbụ nnọpụiche carbon maka arụmọrụ tupu 2024, nke ga-eme ka ọ bụrụ ebe izizi ịme ya n'ọdụ ụgbọ mmiri ọwụwa anyanwụ United States.
N'ịbụ nke dị na mbara ala akụkọ ihe mere eme nke Belmont Park, UBS Arena dị ihe na-erughị kilomita 15 site na ọdụ ụgbọ elu JFK na LaGuardia, a na-enweta ya site na ụgbọ ala na ịnya òkè na ọpụpụ 26A, 26B, na 26D pụọ na Cross Island Parkway. Maka ndị ọbịa na-eji Long Island Rail Road, UBS Arena ga-enweta ndị njem East na Westbound na ọdụ Queens Village LIRR, ndị njem Eastbound na ọdụ Elmont ọhụrụ (ịnweta Westbound na Fall 2022), yana site na ọdụ ọdụ Belmont Spur, na-arụ ọrụ site na Jamaica naanị ụbọchị mmemme. Na mgbakwunye na okporo ụzọ Long Island Rail, a na-enwetakwa ogige ahụ site na MTA Bus Routes Q2 na Q110 yana ọrụ ụgbọ ala Nassau County Inter-Express N6.
Maka ahụike na nchekwa nke onye ọ bụla na ihe ngosi ịhụnanya na-abịa Harry Styles, ndị na-ejide tiketi ga-enyerịrị ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 zuru oke ma ọ bụ ule adịghị mma n'ime awa 48 nke ihe omume ahụ, na mgbakwunye na iyi mkpuchi. Ụmụaka na-erubeghị afọ 12 nwere ike ịga egwu egwu ahụ ma ọ bụrụ na ha wepụta ihe akaebe na-adịghị mma ule COVID-19 emere n'ime awa 48 nke ngosi ahụ.
Na mgbakwunye, ndị ọrụ niile na ebe ngosi ihe ngosi ọ bụla ga-esokwa otu ụkpụrụ ahụ, ha ga-ewetakwa akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 zuru oke ma ọ bụ nsonaazụ ule na-adịghị mma n'ime awa 48, yana iyi ihe mkpuchi oge niile. Ịchọ ihe mkpuchi na nnwale, ma ọ bụ ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, bụ ụzọ kachasị mma iji chebe ahụike na nchekwa nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri na ndị na-akwado anyị ma na-aghọ ngwa ngwa ọhụrụ ọkọlọtọ maka egwu egwu gburugburu US. Agaghị enwe ihe wezuga na iwu ndị a. A na-agba ndị Fans ume ka ha gaa na webụsaịtị UBS Arena maka nkọwa ndị ọzọ.